समाचार र समाज | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: समाचार र सोसायटी
सामारा क्षेत्र को अद्वितीय प्रकृति
सामारा क्षेत्र यसको प्राकृतिक स्रोतहरूमा अद्वितीय छ: त्यहाँ यसको भन्दा ठूलो क्षेत्रमा 300०० भन्दा बढी प्राकृतिक स्मारकहरू छन्। यो यहाँ छ कि दुर्लभ प्रजातिहरूको बोटबिरुवा र जनावरहरु संरक्षित छन्। खनन यस क्षेत्रमा गरिन्छ।
आमा बाट विवेक पत्र। छोरी र आमाले छोरीको लागि एउटा पत्र त्यस्ता जस्तै
जीवनमा सबै प्रकारका परिस्थितिहरू हुन्छन्, र अक्सर यो हुन्छ कि आमा र छोरीले कुराकानी गर्न सक्दैनन्, हृदयदेखि हृदयसम्म, उनीहरूको गोप्य कुरा र चिन्तालाई एक अर्कामा प्रकट गर्दछन्। यस अवस्थामा, तपाईं सक्नुहुन्छ ...
रोस्तोभ-ऑन-डन: शहरको आबादी। रोस्तोभ-ऑन-डोनको जनसंख्या आकार र संरचना
रोस्तोव-डोन-को जनसंख्या आज १ लाख १०० हजार भन्दा बढी छ। यसले आत्मविश्वासका साथ रूसी शहरहरूको सूचीमा दसौं स्थान ओगटेको छ। मिल्टिथ वासिन्दाहरूको जन्म १ 1 100 मा भएको थियो, ...
ज्वालामुखी Eyyafyatlayokudl को इतिहास र विवरण
अनादि कालदेखि, ज्वालामुखीहरूले मानिसहरूलाई डराउँछन् र आकर्षित गर्दछन्। तिनीहरू शताब्दीयौंसम्म सुत्न सक्दछन्। एक उदाहरण Eyjafjallajokull ज्वालामुखी को भर्खरको इतिहास हो। व्यक्तिहरू अग्निपट्टि पर्वतहरूको चुचुरामा खेतहरू खेती गर्छन्, तिनीहरूको चुचुराहरू जित्छन्, ...
ग्रेगोरियन क्यालेन्डरका अनुसार फेब्रुअरी लाई बर्षको th7औं दिन मानिन्छ। इतिहास भरि, त्यहाँ मितिमा धेरै अविस्मरणीय घटनाहरू भएका छन्। यो के यो लेख समर्पित हुनेछ। शीतकालीन खेल दिन ...
रूसको सबैभन्दा धनी महिला: मूल्याङ्कन
"रूसमा सबैभन्दा धनी महिला" रेटिंग फोर्ब्स पत्रिकाले लगातार धेरै वर्षसम्म प्रकाशित गर्यो। यस बर्ष यसमा 30० जना सहभागीहरू थिए जसको भाग्य $ करोड $० लाख देखि १ बिलियन डलर ...
चीनमा चिया समारोह चियाको कलाको कला
चिनियाँ जनताको जीवनमा चियाको विशेष स्थान रहेको छ र चिया पिउनु चिया समारोहको छुट्टै कला भएको छ। चिनियाँहरूले चियालाई ग्रीष्ममा पनि अन्य पेयहरूमा प्राथमिकता दिन्छन्: यो ...
कुकुरको बारेमा हितोपदेश। हितोपदेश र बच्चाहरु को लागि कुराहरु
हितोपदेश र भनाइहरू कुनै पनि राष्ट्रको संस्कृतिको अविभाज्य अंग हो। केही हितोपदेश र भनाइहरु कुनै हिचकिचाहट प्रयोग गर्दछ। त्यसैले जैविक रूपमा तिनीहरू ध्वनि आवाजमा फिट हुन्छन्। यिनीहरूको एक विशाल संख्या ज्ञात छ ...
मस्को को वास्तुकला स्मारक: आधुनिक र ऐतिहासिक
मस्को शहर मात्र उल्लेखनीय छ किनकि यो हाम्रो मातृभूमि को राजधानी हो। यसले देशको सांस्कृतिक सम्पदाका धेरै स्मारकहरू सुरक्षित राखेको छ। १ 15 औं शताब्दीदेखि नै मॉस्को वास्तुकला राष्ट्रिय संस्कृतिको अभिव्यक्ति भएको छ। वास्तुकला ...
रहस्यमय बाबब: चमत्कारको रूख
असामान्य बाओबाब रूख सबै कुरामा अनौंठो हुन्छ: आकार, अनुपातमा, जीवन प्रत्याशाको मामलामा। पनी यसको उत्कृष्ट अस्तित्व दर कुनै पनि बिरूवाको ईर्ष्या हुनेछ। बाओबाब एक अद्भुत रूख हो। उहाँ माल्भोभ परिवारको सबैभन्दा प्रमुख प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, ...
कसले त्यस्तो चकलेट र यो अपमानजनक उपनाम दिइएको छ?
एकचोटि अर्को बुद्धिमान परिवार भेट्न आए, राम्ररी पढिएको र शिक्षित। भेलाहरूमा, सामान्य रूपमा, उनीहरूले खास विषयमा अवैध प्रवासीहरूको बारेमा, ...
हामी जान्छौं कि कसरी सिउँदो गोलाकार
प्रकृतिमा गिलहरीको जीवन वनको रूपमा, एक नियमको रूपमा लिन्छ। जनावरको पोषणको आधार रूखको बीउ हो। यसैकारण गिलहरी मिश्रित जंगलहरूमा बसोबास गर्दछ, जहाँ यो सजीलै पाउन सकिन्छ ...
साइप्रस मा तापमान महिना को लागि
प्यारा भूमध्यसागर रिसोर्ट - साइप्रस टापु - यसको उत्कृष्ट समुद्र तट, घमाइलो मौसम र सुख्खा तातो मौसमको लागि प्रसिद्ध छ। ग्रीष्म .तुमा, हावा यति न्यानो हुन्छ कि साइप्रसको तापक्रम the 35 डिग्री सेल्सियस पार गर्दछ। यहाँ ...
फ्लाईहरू आदेश दिप्टेरासँग सम्बन्धित छ, जसमा विश्वमा एक सय पचास हजार भन्दा बढी प्रजातिहरू छन्। र ती मध्ये केवल केही संक्रमण को वाहक हो, जबकि अधिकतर हानिकारक छन्, पुतली जस्तै। कै त ...
कसरी आफ्नो स्तन पट्टी गर्न - विधि र सल्लाह
स्तन ढक्कन महिलाहरुलाई स्तनपान गराउने रोक्नको एक तरीका हो जुन आफ्नो बच्चालाई कृत्रिम आहारमा सार्न चाहन्छ। तर यो विधि बरु असुरक्षित छ। यदि तपाइँ आफ्नो छाती पट्टी कसरी गर्ने थाहा छैन र के ...
रेजर "चिसो": गुणस्तर, विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाको स्तर
प्रत्येक मानिस बल्छी, कटौती र रीडिंग बिना एक सफा र सफा दाढीको सपना देख्छ। राम्ररी सेभ गर्नु भनेको एक कला हो जसलाई सुधार चाहिन्छ। यसमा मुख्य भूमिका साधनसँग सम्बन्धित छ। आज…
नवीकरणीय र गैर नवीकरणीय स्रोतहरू - दिगो प्रयोग। प्राकृतिक संसाधन विभाग
प्राकृतिक स्रोतसाधन समाजको लागि ठूलो महत्त्वको हुन्छ। तिनीहरूले सामग्री उत्पादन को मुख्य स्रोत को रूप मा कार्य। केहि उद्योगहरू, मुख्यतः कृषि, प्रत्यक्ष प्राकृतिक स्रोतहरूमा निर्भर छन्। विशिष्ट ...
मास्को र मास्को क्षेत्रमा संग्रहालयमा सैन्य उपकरण (तस्विर)
मस्कोमा, सबैजनाले आफैंका लागि ठूलो संख्यामा आकर्षणहरू पत्ता लगाउन सक्छन्। मस्कोका संग्रहालयहरूमा सैनिक उपकरणहरू आगन्तुकहरूको लागि ठूलो चासोको विषय हो। महान् देशभक्त युद्धको समयदेखि अहिले सम्मका प्रदर्शनहरू प्रस्तुत गरिन्छ।
प्रकृतिमा कार्प फीड कस्तो हुन्छ। प्रजनन र प्रजनन कार्प
कार्प परिवारसँग अद्भुत चाँदीको कार्प माछा छ। उनको स्कूलको जीवनशैली र उच्च तौलको कारण, उनी धेरै मछुवाहरू मन पराउँछिन्। त्यसकारण उनीहरूले उनको बानी र छविको निकै ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्छन् ...
सही प्रतिस्पर्धा उत्तम प्रतिस्पर्धाका उदाहरणहरू
उत्पादन सुधार, उत्पादन लागत घटाउन, सबै प्रक्रियाहरु स्वचालित, उद्यमहरुको संरचना अनुकूलन - यी सबै आधुनिक व्यवसाय को विकास को लागी एक महत्वपूर्ण शर्त हो। यो सबै गर्न व्यवसाय पाउने उत्तम तरिका के हो? ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 79 अर्को पाना
77 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,781 प्रश्नहरू।